Basikety vehivavy: resin’i Madagasikara i Maorisy | NewsMada
Fandresena telo tamin’ny lalao telo nataony, no azon’ny ekipam-pirenena malagasy, teo amin’ny taranja basikety, ho an’ny sokajy vehivavy. Omaly, mbola nahazo fahombiazana indray ny tovovavy malagasy, rehefa nanilika an’i Maorisy, mpampiantrano, tamin’ny isa mazava, 74 no ho 49. Tsy niady mihitsy ny fihaonana fa nanaovan’ny mpilalao malagasy, notarihin-dry Ange sy ny namany fanehoan-kery sy fampisehoam-pahaizana, fotsiny izy ireo, nandritra ireo tapa-potoana efatra nilalaovana.
Nitarika an’isa hatrany ny Malagasy tamin’ireo 10 mn inefatra niditra. Tsy naharaka ny hazakazaka sy ny hafetsifetsena nataon’ireo Malagasy mihitsy ny Maorisianina, na teo aza ny fanohanan’ireo mpomba azy.
Tafita amin’ny manasa-dalana, izany ny Malagasy, taorian’ity fandresena azony ity. Tafakatra torak’izany koa ny Maorisianina, noho ny naha “disqualifiée” an-dry zareo, Kaomorianina. Andrasana kosa izay hifanehatra amin’i Madagasikara, eo amin’izany dingana manasa-dalana izany.